China EZEMIDLALO iimbasa mveliso kunye nabenzi | UKumkani
La macandelo angentla abonisa ukukhethwa kweembasa zethu ezikhokelela kushishino kunye noyilo lwezemidlalo nolonwabo. Ewe sinemidlalo ethandwayo njenge-baseball, basketball, ibhola ekhatywayo kunye nebhola ekhatywayo, kodwa sineembasa zebhayisekile, ukubiyela, ukupheka kunye neminye imisebenzi. Sineemedali eziqhelekileyo, ezinje ngeembasa zethu zetotshi ezithandwayo, ezinokusetyenziselwa nawuphi na umsitho.
Iimbasa zezemidlalo zibandakanya iribhoni yentamo. Ngamanye amaxesha iirebhoni zibomvu, zimhlophe, kwaye ziluhlaza okwesibhakabhaka, kodwa iimedali ezininzi ziza nokhetho lwakho lombala webheyibhoni ukufanisa imibala yesikolo okanye yeqela lezemidlalo.
Iimbasa ziyafumaneka ngobukhulu obuninzi, ukuqala nge-1/4 ″ ubukhulu ukuya kuthi ga ku-3 ″. Uninzi luyafumaneka ngombala okanye ngegolide, ngesilivere okanye ngobhedu.
Iimbasa ngaphandle kokukrola zihamba ngenqanawa kwiintsuku nje eziyi-1-2 zeshishini, kunye nokukrolwa, iintsuku zomsebenzi ezi-4-6. Iimbasa zebhaso lezemidlalo zikulungele ukuhanjiswa simahla komhlaba kwiiodolo ngaphezulu kwe- $ 100.
Zininzi iiMEDAL ezinxulumene nemidlalo kunye noyilo lokonwaba.
Ewe, sinemidlalo edumileyo njengebhola, ibasketball, ibhola ekhatywayo kunye nebhola ekhatywayo, kunye neeMEDAL zokuhamba ngebhayisikile, ukubiya, ukupheka kunye neminye imisebenzi.
Inkampani yethu ikwavelisa iiMEDAL ezininzi zenjongo ngokubanzi, ezinje ngembasa yetotshi eyaziwayo yesitayile seOlimpiki, enokusetyenziswa phantse kuwo nawuphi na umsitho.
IMEDALS yezemidlalo ibandakanya izacholo zomqala.
Ngamanye amaxesha, iribhoni ibomvu, mhlophe, kwaye luhlaza okwesibhakabhaka, kodwa iiMEDAL ezininzi zikwanombala weribhoni owukhethileyo ukutshatisa umbala wesikolo sakho okanye iqela lezemidlalo.
Ukuba ufuna ukwenza ngokwezifiso i-logo, sinokuyila kwakhona, sineqela lobuchule kakhulu labayili
Egqithileyo IIMPAWU ZOKUXAKEKA
Okulandelayo: Isikrini sokuprinta i-lapel pin